AnTuTu na - ewere Oppo Reno 2 iji tụọ ya ma gosi ya ọtụtụ atụmatụ ya Gam akporosis
AnTuTu na - ewere Oppo Reno 2 iji tụọ ya ma gosi ya ọtụtụ atụmatụ ya
Ozi ikpeazụ anyị na-ebipụta banyere ya Oppo Reno 2 metụtara ọdịdị na ama ama a echere ogologo oge nwere njirimara mara mma emere na ikpo okwu TENAA, bụ nke ewepụtara ihe onyonyo ya, yana ọtụtụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya.
Ngwaọrụ na-anọchite anya igwe a dị n'etiti AnTuTu, nke bu ebe o mere ngagharị n’oge na-adịbeghị anya iji gosipụta ụfọdụ agwa ya, akpọwo ya dị ka Oppo PCKM00. Anyị ga-ekwu banyere nke a n'okpuru.
Nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi na Oppo Reno 2 nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, na n'ezie ị ga-enweta Android 10 n'ọdịnihu dị nso (lee ekwentị niile ga-enweta osote os a os ebe a). Enwekwara ike ihu na ikpo okwu mkpanaka nke o gha eji mee ihe bu Ihe nhazi Snapdragon 730G, SoC nke kachasị ike n'etiti ndị na-emepụta ihe a na-elekwasị anya na ngalaba egwuregwu.
Oppo Reno 2 edepụtara na AnTuTu
Ndepụta enweghị ozi gbasara nha ihuenyo gị. Agbanyeghị, ọ na - ekwu na ekwentị ahụ na - enye ihe ngosi zuru oke na - adịghị ahụkebe FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ. Ọ ga - enwerịrị igwefoto nwere ike iwepụ, yabụ na ọ gaghị enwe ọpụpụ ọ bụla, mana nke a bụ ihe anyị ga - amata n'ezie August 28.
Modelsdị atọ sitere na OPPO Reno2 ga-ekpughere ọnwa a
N'aka nke ọzọ, okpokoro nke AnTuTu nke OPPO Reno 2 bipụtara na-egosi na o debanye aha akara nke 259,109. Na Redmi K20, nke Snapdragon 730 kwadoro, nke ruru 218,625. Nke a na-egosi na ndị na-emepụta China emeela ka arụmọrụ SD730G rụọ ọrụ na Reno 2, na nke a gosipụtara na obere ule; ọnụ ahịa ahụ enwetawo 95,561, 71,241, 46,844 na 45,063 isi na benchmarkmark maka CPU, GPU, ebe nchekwa, na UX. O doro anya na anyị na-eche ihu otu n'ime etiti kachasị ike nke afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu na - ewere Oppo Reno 2 iji tụọ ya ma gosi ya ọtụtụ atụmatụ ya
Edere atụmatụ nke Huawei Mate 30 Pro na foto gọọmentị
Redmi Rịba ama 8 Pro ga-eme emume ncheta 15 nke World of WarCraft egwuregwu na mbipụta abụọ pere mpe